Somaliland oo digniin u dirtay Maleeshiyaad ku dagaalamay Sanaag – Marqaanmedia24.com
March 13, 2018 maqal iyo muuqaal, wararka 7
Wasiirka Wasaaradda Arrimaha Gudaha Maamulka Somaliland Maxamed Axmed Kaahin ayaa digniin u diray Maleeshiyaad ku dagalaamayay degaanka Dirir Weyne ee hoostaga degmada Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag.
Wasiirka ayaa waxa uu sheegay muhiim in ay tahay in la joojiyo dagaalada mararka qaar dhaca ee saameynta khasaaraha leh u geystay dadka shacabka ah ee aan waxba galabsan.
Sidoo kale wuxuu sheegay qofkii mar dambe lagu arko isaga oo dagaal abaabulaya in Ciidamada ammaanka ay soo qaban doonaan, kadibna la horgeyn doono Maxkamada Millitariga.
Ciidamada ammaanka ayuu ku amray in ay soo qabtaan ragga ku kacaya falalka ka baxsan amniga, si looga hortago arrimaha dhalinaya amni darada.
“Qofkii dambe ee maanta lagu qabto nabadgelyo daro, Ciidamada way ogyihiin Maxkamadaha caadiga ah la geyn maayo, ee waxaa loo geyn doonaa Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida, waxaa loo aqoonsan doonaa qofkii Qori lagu arko in la ciqaabi doono.” Ayuu yiri Wasiir Kaahin.
Maalmihiii dhowaa degaanka Dirir Weyne ee hoostaga degmada Ceel Afweyne ee gobolka Sanaag waxaa ka dhacayay dagaal beeleedyo geystay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah, kuwaasi oo saameeyay dadka degaanka.
Isaaqii baa ishaysta Cayaartu waxay Maraysaa Habaryonis V Habarjeclo.
Isaaqi baa la kala Hayaa Meeshan habarjecladda waa lagaga badan yahay habaryonis waa isu habar wacdeen hubna waxay ka heleen Burco.
Qabiil qaran ma Noqdo Arintan ayaa Markhaati u ah.
Xaaji Saalax Ma Ila Socodaa Jaalle !
Xaaji Saalax Ma Ila Socotaa Jaalle !
Zxb dadku haday badanyahin waa isku dhacaan,balse idinku dee xaajiyad baa idin qaada maxaydun isku dhici,kkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Anaga Dad yar oo caqli badan baanu wada nahay ma nihiin Dad aad u fara badan oo aan Caqli iyo damiir toona lahayn Sidiina ?
Kuwaasa ku xukuma,zxb goormad xaqiiqda aqbali,kkkkkkkkkkkkkkjj
waar ninkii muuse baxsay isagoo shandad lacag ah wata, xitaa xaaskiisii iyo ubadkiisii wuu ka cararay, faysalna kaa hadhi mayuu ku yiri ee inagee meel nabada oon cirro joogin aan si dhaba u wada hadalne kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk
Isaaqi baa Dhexdooda Dagaalamaya bal ii sheeg yey Xukumaan. Sheekadaadu waa Iska hadal Ceeb kuuma Keento !